Taariikhda & Horumarka - El Centro de la Raza
“Waxaan nahay dad kala firidhsan ab ka ab. Waa wax caqli gal ah, anshax ahaan iyo nafsiyan ahaan na wax u dhisaya inaan iska caabbinno dulmiga, oo u midowno qoys ahaan…
Kani Waa Sheekadeenii
Deyrtii 1972 ma ahayn “waqtiyada ugu wanaagsan” Seattle, Waqooyi -galbeed, Mareykanka ama guud ahaan adduunka. Seattle waxay la halgamaysay “Boeing bus,” oo ah hoos -u -dhacii ugu xumaa ee aagga tan iyo 1930 -kii. Kala qaybsanaanta qowmiyadeed ee qotada dheer iyo sidoo kale dagaalkii qarowga ahaa ee Vietnam ayaa burburinayey nafta ummaddeena. Hal dhibic, qaar ka mid ah “nijaarrada” oo aan la garanayn ayaa sameeyey war qaran iyaga oo ka taagay boodhadh hal -abuur leh oo xarrago leh waddada weyn ee akhrinta, “Qofkii ugu dambeeyay ee ka taga Seattle, fadlan ha damiyo nalalka?” (Waxaa weheliya sawir gacmeed nal qaawan iyo xarig daalan.)
Markii dayrtii timid, maalmuhu waa soo yaraadeen, roobabkii ayaa yimid oo hawadu waxay qabowday mid ka mid ah jiilaalka ugu qabow Seattle diiwaanka.
Go'aan dawladeed oo dib -u -dhac ah ayaa muujiyey sida khadadka u dhexeeya arrimaha caalamiga ah, kuwa qaranka iyo kuwa maxalliga ahi ay si fudud u noqon karaan hal. Barnaamij udub dhexaad u ah "Dagaalkii Saboolnimada", wax yar uun ka dib markii uu bilaabmay "WAR" oo aad loo hadal hayey, ayaa si lama filaan ah loo badbaadiyey, taasoo dhalisay arrin horseeday abuuritaanka "El Centro de la Raza."
Qiyaastii toddobaatan arday oo Latino ah iyo toban shaqaale ah oo ka tirsan Chicano: Barnaamijka Waxbarashada Aasaasiga ah ee Ingiriiska iyo Dadka Waaweyn ee laanta Duwamish ee Kulliyadda Bulshada ee Koonfurta Seattle waxay isku arkeen iyagoo aan lahayn hoy waxbarasho.
Tallaabada Ugu Weyn, ee Geesinimada leh
Abbaaro 8:00 subaxnimo ee Oktoobar 11, 1972, wafdi saddex qof ah ayaa soo dhoweeyey maareeyaha tas -hiilaadka ee Dugsiga Dadweynaha Seattle oo tusayay dhisme burbursan oo duntay wakiilo ka socda urur “qaar” ah oo danaynaya inay kiraystaan ​​ama iibsadaan saddexda laga tagay. dhismaha dugsiga hoose ee sheekada oo ku yaal badhtamaha hal dhisme oo laba jibbaaran.
Markii qufulkii la gujiyay, hoggaamiyihii weftiga ayaa qufulkii ka saaray farsamadii oo jeebkiisa geliyey isaga oo jahawareeriyay ilaaliyaha oo aan waxba sheegin.
Sidaas ayay hadda ku bilaabatay socdaal taariikhi ah oo ku dhawaad ​​50 sano ah iyadoo shaqaalaha udub-dhexaadka ah, ardayda iyo qoysaskoodu ay si argagax leh oo aamusnaan ah uga soo socdeen duurka gadaashiisana ay baabuur dhigteen albaabka furan.
Qabsashadii Dugsiga Beacon Hill ee laga tegey oo ku yaal dhagaxa toban daqiiqo ka xigta badhtamaha magaalada Seattle ayaa bilaabmay. Waqtigaas Dugsiga Beacon Hill wuu joogsaday wuxuuna jiray El Centro de la Raza.
Dhacdadan ayaa la mid ah mudaaharaadyo siyaasadeed iyo bulsheed oo aan la tirin karin iyo tobankii sano ee la soo dhaafay waxayna sii xoogaysatay 1968 markii la dilay Dr. Martin Luther King Jr.
Sannadkii ku xigay, Jasiiradda Alcatraz ee San Francisco Bay ayaa la qabsaday.
Sannadkii 1970, Fort Lawton, oo ah xarun milatari oo dheeri ah oo ku taal Seattle, waxaa deggenaa dad Hindi ah oo raadinayay soo celinta xuquuqdoodii heshiiska oo ay ku jiraan kalluumeysiga salmon iyo xuquuqda dhulka ku saleysan. Weerarada shaqaalaha beeraha ee waaweyn ayaa ka dhacayay California iyo Dooxada Yakima ee Gobolka Washington. Deganeyaasha Aasiya ee Seattle “Chinatown” oo ku dhow xaafadda Beacon Hill ayaa la dagaallamayay sharraxidda aagga iyagoo dhowr jeer ku garaacay waddooyinka.
Inta badan xarumaha jaamacadaha ee ku yaal gobolka, qaranka iyo adduunkaba waxay la kulmeen mudaaharaadyo ballaaran iyo shaqooyin ka dhan ah Dagaalkii Vietnam. Ummadda oo dhan ayaa la yaabtay dilalkii milateri ee ardayda mudaaharaadka dhigata ee Jaamacadda Jackson State iyo Kent State Universities ee hoos imaanayey daawashada Madaxweynaha ee Richard Nixon.
Kuwii hoggaaminayey qabsashadii nabdoonayd ee Dugsiga Beacon Hill ee burburay waxay ka qaybgaleen waxqabadyadan badan waxayna la kulmeen awoodda ku biiridda dadaallada ka dhanka ah caqabadaha isirka iyo fasalka.
El Centro De La Raza: Xarunta Dadka Dhammaan Jinsiyada
Bilowgii, kuweenna mashquulka ah oo bilaabay inay beddelaan dugsigii hoose ee hore waxaa ku soo biiray boqollaal ka mid ah xulufadii hore ee isbahaysiga dhammaan qowmiyadaha iyo qaybaha dhaqaalaha oo cad oo ku kalsoonaa go'aankayaga. Sida xaafadda ku xeeran, iyo Seattle oo dhan, waxaan u taagnay qaansoroobaadnimada aadanaha.
Marka, in kasta oo aasaaska El Centro de la Raza uu ka dhashay Latinos oo uu helay magac Isbaanish ah, waxay bilaabatay, oo weli tahay, “Xarunta Dadka Jinsiyada oo dhan.” Waa “hoy” dhammaan dadka danaynaya inay sii wadaan halganka adduun ka wanaagsan iyagoo u adeegaya, wax baraya, isdifaacaya oo is abaabulaya midba midka kale iyo dadkeenna si loo dhiso “bulshada la jecel yahay” sida uu saadaaliyay King, Bolivar, Zapata, Ghandi, Martí, Joe Hill, Hooyo Teresa, Ho Chi Minh, Emma Tenayuca, Che, Black Elk, Geronimo, iyo kumanaan kale oo geesiyaasheena iyo shahiidyadeenna ah.
Tan iyo bilowgii El Centro de la Raza waxay siisay meel ay ku kulmaan Seattle si kale u kala firdhay… iyo 1972, bulshada Latino oo aan la arki karin waxayna ku soo dhaweynaysaa dhammaan shaqsiyaadka gacmaha furan.
Annaga oo si nabad ah u haysannay Dugsiga Beacon Hill waxaan abuurnay “bulsho la jecel yahay,” annaga oo aan haysan biyo iyo kulayl, iyadoo wada -xaajoodyadu ay ka socdeen Magaalada Seattle iyo Dugsiyada Dadweynaha Seattle. Sababtoo ah bilooyin “wax -qabad -la’aan” rasmi ah waxay noqotay lama huraan in la qabsado kuraasta iyo Rugta Golaha Magaalada Seattle si loo xoojiyo go'aankeenna ah inaan horumarinno asaas asaas ah oo dhab ah iyo xarun bulsho oo dimoqraadi ah oo dhab ah goobta.
Mid ka mid ah doodaha muhiimka ah ayaa ka qarxay goobta ugu habboon xarunta Latino. Waxaan ku qanacnay in goobta Beacon Hill ay tahay tan ugu habboon sababtoo ah waa meel dhexe, helitaan, iyo suuragalnimada ballaarinta iyo horumarka.
Oggolaanshaha kama dambaysta ah ee Duqa Magaalada Wes Uhlman si loo sugo ammaanka xarunta ayaa timid kadib markii si nabad ah loo qabsaday xafiiskiisa kadibna la xiray hoggaamiyeyaasha El Centro de la Raza. Deggenaanshaha saddexda bilood ah, mid ka mid ah jiilaalka ugu qabow ee Seattle, ayaa sababay in dhismaha laga kireeyo shan sano sannadkii $ 1 sannadkii.
Guushii ka dib, xaqiiqdii ayaa soo degtay oo annaga oo dulqaadanay oo abaabulnay saddex bilood oo adag waxay ogaadeen in shaqada dhabta ahi ay hadda bilaabatay.
Laga soo bilaabo 1972, dhididka dadka, ilmada, heesaha, daraasadda, allabariga, iyo hal-abuurka ayaa dhistay oo hadda leh kayd quful, iyo fuusto, iyo dhammaan xishoodka habboon, oo ah mid ka mid ah ururada bulshada ku dhisan ee aan la isku haleyn karin waxna soo saarin.
Isagoo tixraacaya kaliya laba ka mid ah abaal -marinnada caalamiga ah, qaranka, gobolka, iyo maxalliga ah, El Centro de la Raza malaha waa hay'adda keliya ee adduunka ee qabata, dhanka kale, Nicaraguan “Biladdii Sannad -guurada 10aad ee Kacaankii Sandinista” (1989 .
El Centro de la Raza waxay raadinaysay inay u adeegto oo awood siiso cid kasta oo aan gaarno si aan midba midka kale wax uga baranno oo aan u mideyno awoodeena halganka sharafta leh ee isbeddel bulsheedka aasaasiga ah. Bixinta adeegyo badan oo badbaado oo keliya ayaa ah gargaar ku -meelgaar ah oo loogu talagalay nabarrada bulsheed ee qoto dheer; kama hadleyso xididada saboolnimada, takoorka, kala fogaanshaha iyo quusta.
El Centro de la Raza waxay ku dadaaleysaa inay u adeegsato dhaqdhaqaaqyada bulshada, dhaqanka, waxbarashada, dhaqaalaha iyo madaniga sidii gaadiid si ay isugu keenaan dadyowga jinsiyadaha oo dhan waxayna diidaan inay kala saaraan hannaanka dhaqaale ee ummaddeena si ay u noqoto musiibada taariikhiga ah ee cunsuriyadda, saboolnimada, iyo dagaalka. Ururkayagu wuxuu isku dayaa inuu isku darsado dareen xoog leh oo is-qiimayn iyo isku xidhnaan qoyskiisa iyo dhaqankiisa oo si firfircoon uga qaybqaata arrimaha bulshada. Is-maamulkeenna wadajirka ah wuxuu horumariyey shabakad ballaaran-deegaan ahaan, qaran ahaan iyo caalami ahaanba-si ay ugu biiraan dadyowga kala duwan, ee leh dhibaatooyinka guud, iyagoo raadinaya xal wax ku ool ah oo caddaalad ah.
Marna Uma Dhiibno Cadaalad Darrada
Dhammaanteen waan ognahay inay tahay halgan adag. Ururku wuxuu si cad u wajahayaa dhibaatooyinka cunsuriyadda, jinsiga iyo noocyada kale ee sinnaan la'aanta ee dunida qarniyo badan soo jiitamaysay. Dhibaatooyinkan waxaa lagu abuuray qarniyo badan waxaana kaliya xallin doona socodka hore ee taariikhda.
El Centro de la Raza sida ay ugu heellan tahay xallinta iyaga oo dhisaya dareenka bulshada ayaa sida ugu wanaagsan loogu muujiyaa ereyada ugu horreeya 12 -ka Mabaadi'deena; kuwaas oo dhammaantood ka hadlaya madaxbannaanida iyo ajendaha caalamiga ah oo nagu hoggaamiyay hufnaan iyo guul iyada oo loo marayo marxalad qasan oo taariikh ah.
“In la wadaago, la bixiyo oo loo qaybiyo adeegyadayada, kheyraadka, aqoonta iyo xirfadaha ka -qaybgalayaasheena, bulshada, booqdayaasha iyo qoyska ballaaran ee aadanaha oo leh dhammaan sharafta ku habboon shaqsiyadooda, baahidooda iyo xaaladdooda. Si taas loo sameeyo si hal abuur leh oo diirran, dareen dhaqameed, caddaalad, xamaasad, naxariis, daacadnimo, yididiilo, dulqaad iyo is -hoosaysiin dhammaan dhinacyada shaqada. ”
Warbaahinta guud, mar kasta oo ay u aragto inay ku habboon tahay (ama lagama maarmaan tahay) si ay u daboosho qayb ka mid ah sheekadeenna, waxay had iyo jeer ahayd mid aan dhammaystirnayn, qalloocsan, dareen leh ama been abuur ah.
Hadda, iyadoo leh fursadaha horumarsan ee horumarka shabakadda internetka, waxaan sii wadi doonnaa inaan u sheegno sheekadeena aan la sifeyn.
Bienvenidos Siempre iyo El Centro de la Raza
El Corrido de Roberto Maestas Waxaa curiyay Cesar Amaral